Huawei Mate 30 nwere ike igbu oge ọbịbịa ya n'ahịa | Gam akporosis
Izu abụọ gara aga ka ekpughere ya na Huawei Mate 30 a ga-ewepụta ya na etiti Septemba. Ọhụụ ọhụrụ dị elu maka akara ndị China, nke nwere ike ịmepụta nnukwu mmasị na ahịa. Mana o nwere ike ịdaba na nsogbu mgbe ọ rutere n'ahịa, n'ihi mgbochi US. Ebe nke a nwere ike gbochie ha iji gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
N'ezie, nke a bụ ihe doro anya doro anya maka ndị nrụpụta. Ya mere, ọ na-ekwu na ọbịbịa nke Huawei Mate 30 ndị a n'ahịa nwere ike igbu oge, iji gbalịa ịchọta azịza maka nsogbu a na-eche ụlọ ọrụ ahụ, nke na-agaghị ekwe ka iji gam akporo na ekwentị ndị a.
The Chinese ika emewo ka o doo anya na ihe karịrị otu oge ya bu n'obi iji gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ na ya igwe. Ya mere, ọ bụghị ihe ọhụrụ iche na mbata nke Huawei Mate 30 a na-egbu oge, iji chọta azịza, nke kwe ka ngwaọrụ ndị a jiri gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
Branddị akara ndị China emeghachibeghị banyere asịrị izu a. Ekwenyebeghị ma ọ bụ eziokwu na ngwaọrụ ndị a agaghị enwe ike iji gam akporo. Otu ọnụ na-ekwuru Google kwuru nke a, mana anyị amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ 100% ikpeazụ. Yabụ enwere obi abụọ.
Ya mere anyi kwesiri ichere ka amata ya kedu ihe akara ga-eme na Huawei Mate 30 a. A tụrụ anya na ngwaọrụ ndị a n'etiti Septemba, opekata mpe ngosi ha. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ngosi a ga-egbu oge, ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na mwepụta ga-abụ ihe na-egbu oge.
Anyị ga-echere ụbọchị ole na ole ọzọ maka slee ihe ga - emecha mee n’igwe a. Ọ bụrụ na mbido ya na-egbu oge, ọ bụrụ na ha ga-enwe ike iji gam akporo ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọ bụ ọ bụrụ na a manyere akara ndị China iji HarmonyOS mee ihe na Huawei Mate 30. Ọtụtụ obi abụọ, nke n'oge a enweghị azịza, mana anyị nwere olile anya na ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya mgbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Mate 30 nwere ike igbu oge mbido ya